Mmasị Mmasị | FXCC
Home / trading / Ngwaọrụ Forex / Mmasị Mmasị
Ọnụ ọgụgụ ndị nwere mmasị na isi ụlọ akụ nwere ike inwe mmetụta dị oke egwu na arụmọrụ anyị. Na tebụl a, anyị enyela ndepụta zuru oke nke ọnụ ọgụgụ isi ihe ndị dị na ya, na-emetụta ọnụ ụlọ akụ etiti ụwa niile.
Dị ka ihe atụ, a ghaghị ọkwa ọkwa mgbanwe ọnụego, dịka ọmụmaatụ, nke ọ bụla n'ime isi ụlọ akụ anọ kachasị mkpa: ECB, Bank Of Japan, The Fed and UK's Bank Of England, mgbe ahụ, mgbanwe ahụ nwere ike ime ka arụmọrụ nke otu ụzọ ego gbanwere.
atụ: Ka anyị kwuo na Fed na-egosi na 0.25% na-ebili na United States interest interest, mgbe ahụ na-ekwu na dollar ga-ebili na ya bụ isi na ọtụtụ n'ime ya obere ndị ọgbọ. Ndị na-emefu ego ga-alaghachi na dollar ahụ ka a na-ekpe ikpe na ha ga-enyefe ọnụ ọgụgụ ka mma maka mmasị ego.
N'okwu dị mfe, ọ bụrụ na ị na-enweta 0.5% mmasị na akaụntụ nchekwa, mgbe ahụ itinye ego na dollar, na USA na-echekwa ụgbọ ego ego nke nwere ọnụego 0.75, a na-achọpụta na ọ bara uru ma nwee ike ịghọ ego bara uru .
E nwekwara ihe ndị ọzọ na-atụle ọnụ ọgụgụ ụlọ etiti, dịka ọmụmaatụ, ohere iji mee ihe ihe a na-akpọ "ebu ụzọ ahịa".
Igosipụta oke ahia bụ atụmatụ nke onye na-ere ahịa na-ere otu ego, nke nwere ọnụ ala dị ala ma na-eji ego iji zụta ego dị iche, nke na-enye ọnụ ọgụgụ dị elu. Onye ahia na-eji usoro a achọpụta ihe dị iche n'etiti ọnụego. Oge ọdịiche a nwere ike ịba ụba, na-adabere na ọkwa dị elu. Anyị na-ahụ ihe atụ dị mfe nke ọrụ ịzụ ahịa na ebe anyị na-ahụ ahịa ahịa mgbe niile; ọ bụrụ na anyị eche na dollar ga-ebili na euro, mgbe ahụ anyị ga-adị obere EUR / USD.
N'agbanyegh i ihe nkenke a p ur u inweta di ka ihe ndep ur u isi n 'ul o akw ukw o ji eme ihe, uru nd i ka ogologo, nke nd i na-eme ihe nd i mmad u na-at ule ka ha bu "ndi ahia", ma obu "ndi ahia" mkpebi site na ụlọ akụ etiti. Ụdị ndị ahịa ndị ọkachamara a nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ jide ha ogologo oge ọnọdụ n'ọnọdụ ego dị iche iche, na-ekwu na mgbanwe ọnụego. Ha nwere ike itinye ego ole na ole n'ime afọ ọ bụla, ma ọ bụ ahia naanị mgbe ụlọ ọrụ etiti na-agbanwe ọnụ ahịa ya.
Nweta Ulo oru Ulo oru Banyere Central Bank